Ninka ugu carabka dheer dunida oo la helay: Daawo Video - iftineducation.com
Ninka ugu carabka dheer dunida oo la helay: Daawo Video
iftineducation.com – Nick Stoeberi ayaa noqday qofka ugu carab dheer dunida inta lagu diiwaan geliyay buuga lagu daawaco waxyaabaha la yaabka ee adduunka lagu arko, wuxuuna ninkaani uu booska kala baxay Haweeney horay u haysatay Recordka buuga Guinness World Records.
Wiilkaani dhalinyarada ee kasoo jeeda gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa cabirka carabkiisa dhan yahay 10.1cm, taasoo la macna ah in uu yahay qofka ugu carabka dheer dunida.
cajiib-carabWaxaa horay Ricordkan u haysatay Chanel Tappe oo isla gobolka California kasoo jeeda, taasoo cabirka carabkeeda uu ahaa 9.75cm.
buuga Guinness World Records waxaa markii ugu horaysay la daabacay 1955, iyada oo in ka badan 132 milyan oo nuqul caalamka laga iibsaday isla markaana lagu daabacay 20 af, laguma iibiyay in ka badan 100 dal.
Askari ka tirsan Booliska oo maanta shan qof ku toogtay Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir
C/weli Gaas oo booqday garoonka Bosaso oo dhismo..: Sawirro